Soo dejisan MP3Gain 1.2.5 – Vessoft
Qeybta: Tifaftirayaasha warbaahinta
Bogga rasmiga ah: MP3Gain
MP3Gain – software ah si caadi mugga MP3-faylasha aan khasaaro ah oo tayo leh. MP3Gain dejisa dhawaaqa, tafaasiil iyo go’aamiso tayada codka. Software ka kooban qalab loogu talagalay tafatirka keliya oo MP3-faylasha ama processing Dufcaddii ee content jira. MP3Gain Qori-beddelka inay tag ah APEv2, in kuu ogolaanayaa inaad si aad u joojiso howlgalka la soo dhaafay, haddii loo baahdo. Software ayaa gubtay, khayraadka nidaamka yar oo uu leeyahay si fudud aad ku isticmaasho interface.
Caadi Volume of MP3-files
Processing Dufcaddii faylasha
Suurtagalnimada in uu joojiyaan hawlahoodii soo dhaafay
Interface sahlan oo wanaagsan
Soo dejisan MP3Gain
Faallo ku saabsan MP3Gain
MP3Gain Xirfadaha la xiriira
Hanti-dhowrka – tifaftire maqal oo leh shaqooyin fara badan ayaa loogu talagalay in lagu saxo feylasha maqalka heer ku habboon, laga duubay codka laga helo ilo kala duwan oo meesha looga saaro cilladaha duubista.
software The functional in la files warbaahinta shaqeeyaan. Waxaa ku jira qalab si edit photos, files audio iyo dar saamaynta kala duwan si ay videos.
Warshadda Qaabka – beddelaad shaqeynaya faylalka barnaamijyada badan. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u beddelo faylal kala duwan qaabab caan ah oo loogu talagalay kumbuyuutarka iyo aaladda la qaadi karo.
Tani waa software si loo isticmaalo faylalka maqalka iyo fiidiyoowga qaababka muusikada. Adeegga wuxuu ku yimaadaa qaababka wax soo saar iyo wax soo saar.
Tani waa xirfadle ah isla markaana wakhti isku mid ah oo tifaftiran oo loo isticmaali karo tifaftiraha fiidiyowga iyadoo la adeegsanayo qaababka waxtarka leh iyo filfilayaasha kala duwan.
software The si ay u gudbiyaan xogta iyo maareeyaan faylasha of qaabab kala duwan oo ka soo qalabka fog by la isticmaalayo teknoolajiyada wireless iyo daruur.
browser la set oo ah muuqaalada waxtar leh waxaa loogu talagalay keli raalida saaxiibada ka shabakadaha bulshada VKontakte, Facebook iyo Odnoklassniki.
Mindomo – softiweer ayaa abaabula fikradahaaga iyo fikradahaaga qaab dhismeedka geed oo leh habka ku habboon maaraynta hawsha.
Aalad awood leh amniga macluumaadka shirkadaha. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo dhalin wararka ee muddada la hubo.